मोरङ । विराटनगरवासीको रात्रिकालीन खेलकूद हेर्ने चाहना आगामी मङ्सीरदेखि पूरा हुने भएको छ । वर्षको नौ महिना प्रचण्ड गर्मी हुने यस क्षेत्रमा रात्रिमा खेलकूद हेर्ने नागरिकको इच्छा प्रदेश सरकारको सहयोगले पूरा
आर्थिक समस्यामा झापा ११, पुरानाे साख जाेगाउनै चिन्ता
झापा । नेपालमा कुनै पनि फुटबल क्लवलाई ब्यवसायीक हुनका लागि निकै कठिन अवस्था रहेको छ । एक बर्ष खेलाडी पाल्नपनि काठमाडौंमा राम्रो आयस्रोत भएका क्लवलाई नै धौ धौ हुने अवस्था
कात्तिक २८ र मंसिर २ गते नेपालले बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने
काठमाडौं । आगामी कात्तिक २८ र मंसिर २ गते नेपालले बंगलादेशसँग दुई मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने भएको छ । कोरोना कहरकाबीच नेपालले दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने मिति तय भएको हो ।
खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्नेबारे सरकार अझै मौन !
काठमाडौं । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानलाई परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको छ। मान्छेहरु भेलाहुने परीक्षा सञ्चालनको अनुमति दिएको सरकार खेलकुद क्षेत्र चलायमान बनाउने विषयमा भने मौन छ ।
खेलकुद जगतमा सधैँ चम्किरहेको इलाम
नमीन ढकाल इलाम । वि.सं. १९९० को दशकमा पेट्रोलम्याक्स बालेर राणा र रैती टिमबीच खेलिएको फुटबलको किस्सा होस् या पानीमा रुझ्दै खेलिएको कराते, भूकम्पपीडित स्मृति कप, माईभ्याली गोल्डकप या फुटबलरको
राजन घिमिरे काठमाडौं । लामो समयदेखी शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय रहंदै आएको एम्पाएर इन्टरनेशनल एजुकेशन एण्ड भिसा सर्भिसेसले अब खेलकूद क्षेत्रमा पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउंने भएको छ । प्रबासमा नेपालीहरूलाई खेलकूद
काठमाण्डौ । १३ औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटमा चेन्नई सुपर किङ्सले विजयी सुरुवात गरेको छ । गएराति युएईको आबुधाबीमा भएको उद्घाटन खेलमा साविक विजेता मुम्बई इन्डियन्सलाई ५ विकेटले
काठमाडौं । गत दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीले घरेलु भूमिमा देखाएको प्रदर्शन स्मरणीय रह्यो। अवसर पाए नेपाली खेलाडी सक्षम छन् भन्ने प्रमाणित भएको ९ महिना पूरा नहुँदै फेरि नेपाली खेलाडीको
काठमाडौँ । मिलेमतोमा खेल (म्याच फिक्सिङ) खेलेको आरोप लागेका तत्कालिन कप्तान सागर थापासहित पाँच खेलाडीलाई सर्वोच्च अदालतले सफाई दिँदै निर्दोष भएको ठहर गरेको छ। न्यायाधीशद्धय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बमकुमार
एजेन्सी । फ्रान्सेली च्याम्पियन पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) का ब्राजिलियन स्टार नेयमारसहित तीन खेलाडीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । पीएसजीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन खेलाडीमा कोरोना संक्रमण